Uluhlu 3.. Funda iTheyibhile yokuPhindaphinda kuka-3
U-3 uzakuba lelo nani linye amaxesha ama-3. Ngendlela yokuba 3 × 2 = 6 okanye yintoni efanayo 2 + 2 + 2 = 6.
Masibone umzekelo: ukuba sineebhasikithi ezi-3 ezinee-apile ezi-5 ngaphakathi, ingangama-3 × 5 = ama-apile ali-15. Into esiyenzileyo kulo mzekelo yongeza ka-3 umphinda-phinde ngo-5, oko kukuthi, besizakuba no-5 + 5 + 5, ngale ndlela iyakusinika isi-15 njengesiphumo.
Uya kuyisebenzisa kakhulu le tafile ebomini bakho bonke. Itafile esetyenziselwa ukwazi ixabiso, umzekelo, iimpahla ezi-3 ezifanayo, ngale ndlela unokwazi ixabiso ngokukhawuleza.
Iimpawu zetheyibhile e-3 :
• Enye yeetafile eziphindaphindayo nayiphi na imali yokuqala.
• Naliphi na inani eliphindaphindwe ngo-3 liyakuhlala liphindaphindwe kathathu, okanye yintoni enye?
• Itafile ye-3 iya kusinceda sazi, phakathi kwezinye izinto, ixabiso leemveliso ezi-3 ezifanayo.
• Ukuba sineengxowa ezi-3 kwaye nganye kuzo kukho iibhola ezi-5, siyakuba neebhola ezili-15: 3 × 5 = 15
• Ukuba sineebhasikithi ezi-3 kwaye kuzo nganye kukho ii-apile ezi-3, siya kuba nee-apile ezisi-9: 3 × 3 = 9
• Ukuba sineengxowa ezi-3 kwaye ingxowa nganye ineebhotile ezi-6 zamanzi, siyakuba ne-3 × 6 = iibhotile ezili-18 zamanzi.